सात टुक्रामा भेटिएको थियो यी युवतीको शव, यसरी खुल्यो मिस्ट्री मर्डरको रहस्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सात टुक्रामा भेटिएको थियो यी युवतीको शव, यसरी खुल्यो मिस्ट्री मर्डरको रहस्य
एजेन्सी । कुरा केही महिना पहिलाको हो । दिल्लीमा एक शव फेला परेको थियो । जसलाइ सात टुक्रा पारिएको थियो । शवलाई कार्टून, बक्स र ब्यागमा प्याक गरिएको थियो । शवका टुक्रा हेर्दा थाहा हुन्थ्यो, शव कुनै युवतीको हो ।
तर, प्रारम्भिक छानविनमा मृतकको पहिचना पनि हुन सकेन र हत्याराबारे कुनै सुराग पनि फेला परेन । तर, अचानक प्रहरीको नजर त्यो बक्समा लेखिएको शब्दमा पर्यो । खासमा त्यसमा एक कूरियर कम्पनीको ठेगाना लेखिएको थियो । के यसै ठेगानाका माध्यमबाट प्रहरी हत्यारासम्म पुग्न सक्ला? कथा यहीबाट शुरु हुन्छ ।
एक घना वस्तीमा रहेको एक फोहार फालिने घरको दुई यस्ता वस्तुमा मानिसहरुको आँखा पर्यो जुन सामान्यतया फोहोरमा यस्ता चिज फालिएको हुँदैन । यहाँ एक ठूलो ब्याग र नजिकै थियो प्याक्ड कार्टून बक्स । मात्र यी दुई चिजले मानिसहरुको ध्यान आफुतिर तानेको भने होइन । यहाँबाट आउन गन्धले पनि मानिसहरु हैरान थिए । मानिसहरुको दिमाग खराब भयो अनि प्रहरीलाई सूचना दिए ।
केही समयमै दिल्ली प्रहरी त्यहाँ पुग्यो । तर ब्याग र काटूर्न खोलेपछि प्रहरी हैरान भयो । ब्यागमा एक युवतीको शव थियो । त्यो पनि सात टुक्रामा । हात, खुट्टा, टाउको, घाँटी सबै अलग अलग । प्रहरीले शव बरामद गरेर पोस्टमार्टमका लागि पठायो । जुन किसिमले शवलाई टुक्रा टुक्रा पारेर ब्याग र कार्टूनमा प्याक गरिएको थियो, त्यसबाट घटना हत्याको भएको अनुमान गर्न कठि भएन । तर मृतक को हुन्? हत्यारा को हो? यी प्रश्नको भने त्यहाँ कुनै जवाफ थिएन ।
प्रहरीलाई यी प्रश्नको जवाफका लागि सबैभन्दा पहिला मृतकको पहिचान गर्नु जरुरी थियो । तर, त्यहाँ आसपास प्रहरीले निकै सोधपुछ गर्दा पनि मृतकको पहिचान हुन सकेन । दैनिक प्रहरीले प्रयास गरे पनि कुनै सुराग फेला परेन ।
यसैक्रममा प्रहरीको नजर यस्तो चिजमा पर्यो जसले प्रहरीलाई आशा जगायो । हत्याराले जुन कार्टूनमा शव प्याक गरेका थिए, सो कार्टूनमा एक कूरियर कम्पनीको ठेगाना थियो । प्रहरीले यसैका माध्यमबाट अन्य सुरागको खोजीमा लाग्ने निर्णय लियो ।
गुरुग्रामस्थित सो कूरियर कम्पनीमा प्रहरी पुग्यो । कूरियरवालाले बक्सको पहिचान गर्यो र उसले यो कूरियर एक ग्रहाकले यूएईबाट पार्सल गरेको र त्यसको नाम जावेद अख्तर रहेको बतायो ।
अब प्रहरी कूरियरवालाले दिएको ठेगानामा सिधै जावेद अख्तरको घर अलीगढ पुग्यो । त्यहाँ जावेदमात्र फेला परेन उसले कार्टून पनि पहिचान गर्यो । उसले तीन वर्ष पहिला यसै कार्टूनमा यूएईबाट केही आवश्यक वस्तु मगाएको बतायो ।
यी मध्ये केही बक्स आफ्नी नोकर्नीलई दिएको र केही बक्स दिल्लीको शाहीनबागस्थित घरमा राखेको थियो । शाहीनबागको उसको घरमा केही युवाहरु भाडामा बस्थे ।
अब दिल्ली प्रहरी शाहीनबाग पुग्यो । प्ररहीको सबै आशा अब यही घरमा थियो ।
प्रहरी शाहीनबागस्थित जावेदको घर पुग्दा त्यहाँ ताला लगाइएको थियो । यसले प्रहरीले साजिद अलीमाथि शंका गर्न शुरु गर्यो । प्रहरीले स्थानीयहरुसँग साजिदबारे जानकारी संकलन गर्न थाल्यो । साजिदले त्यहाँबाट घर खाली गरेर जान लागेको बताएको प्रहरी थाहा पायो ।
अब प्रहरीले साजिदको खोजीमा जुट्यो । प्रहरीका धेरै टीम उसको खोजीमा लागे । एक दिन उ प्रहरीको हात लाग्यो । साजिदले हत्याको जुन कुरा बतायो, त्यो निकै हैरान पार्नेखालको थियो । साजिदले प्रहरीलाई भन्यो– उसको प्रायः श्रीमतीसँग झगडा हुन्थ्यो । झगडाका दुई कारण थिए । एक उसको कुनै युवतीसँगको चक्कर, अर्को उसको बेरोजगारी ।
यसैकारण उसले श्रीमतीको हत्या गरिदियो । २०–२१ जून राती उसले श्रीमतीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको स्वीकार गर्यो । त्यसपछि भाईहरुसँग मिलेर शवको टुक्रा टुक्रा बनाएर ब्यागमा र कार्टून बक्समा प्याक गरेको उसले बतायो ।
प्रहरीका अनुसार उसकी श्रीमती हिन्दु थिइन् । २०११ मा पढाईका क्रममा साजिदको भेट राजबालासँग भएको थियो । पछि दुबैले बिहे गरे । श्रीमतीको नाम परिवर्तन गरेर जूही राखियो । साजिद पेशाले बिटेक इन्जियिर हो । तर, उ बेरोजगार थियो ।